विश्व Archives - Mitho Khabar
November 3, 2020 mithokhabarLeaveaComment on ‘आरआरआर’का डाइरेक्टरलाई धम्की !
काठमाडौं । बाहुबली फेम डाइरेक्टर एसएस राजामौलीको अपकमिङ फिल्म आरआरआर रिलिज हुनुपूर्व नै विवादमा घेरिएको छ । तेलंगानाका बीजेपी नेता र करीम नगरका सांसद सञ्जयले फिल्ममा फ्रीडम फाइटर कोमराम भीमको रि प्रजेन्टेशनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले राजामौलीलाई धम्की समेत दिएका छन् । आलिदाबादका भाजपा सांसद सोयम बापूले पनि फिल्ममेकरमाथि प्रश्न खडा गरेका छन् । […]
November 3, 2020 mithokhabarLeaveaComment on भियतनाममा एकचोटि प्रयोग भइसकेको तीन लाख कन्डम बिक्रीमा
लण्डन । भियतनाममा गैरकानूनी रूपमा ठूलो परिमाणमा विक्रीका लागि राखिएको एकचोटि प्रयोग भइसकेको कन्डम प्रहरीले बरामद गरेको छ । झन्डै तीन लाख २० हजारवटा त्यस्ता कन्डम सर्वसाधारण ग्राहकलाई बेच्न राखिएको थियो । भिडिओ फुटेजमा कन्डमका दर्जनौँ झोला देखिएका छन् । प्रहरीले दक्षिणी भेगमा अवस्थित बन द्युङ्ग प्रान्तस्थित एउटा गोदाममा छापा मार्दा फेला परेको हो । […]
November 3, 2020 mithokhabarLeaveaComment on न्युयाेर्ककाे जेलमा कैदीसँग शिक्षिकाकाे विवाह
न्युयाेर्क । अमेरिकामा कानूनकी विद्यार्थी ३२ वर्षीया चेल्सी मुरकाले जेलमा सजाय भाेगिरहेका व्यक्तिसँग विवाह गरेकी छिन् । गत साता उनका प्रेमी क्रिस्टोफर ब्ल्याकवेलसँग विवाह भएकाे छ । उनका यी सपना त पूरा भएनन् तर उनले आफूलाई सबभन्दा भाग्यमानी ठानेकी छन् । क्रिस्टोफर र चेल्सीको पछिल्लोपटक छ महिनाअघि भेट भएको थियो। त्यसपछि एकैपटक बिहेकै दिन हो, […]
October 28, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on भारत र अमेरिका नजिकिँदा नेपाललाई के असर पर्छ ?
भारत र अमेरिका नजिकिँदा नेपाललाई के असर पर्छ ? १२ कात्तिक, काठमाडौं । पछिल्ला केही महिनायताका घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने चीनसँग सीमा विवाद बढेसँगै भारत अमेरिकासँग अलि नजिकिएको देखिन्छ । चीनले पनि सीमा विवादका सम्बन्धमा आफूसँगको बार्गेनिङमा बलियो रुपमा प्रस्तुत हुनका लागि भारत अमेरिकासँग नजिकिएको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । केही महिनायता भारत र अमेरिकाका उच्च […]
October 25, 2020 mithokhabarLeaveaComment on काेस्टारिकामा पहिलो पटक समलिंगी विवाह
लण्डन । मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिकामा वैवाहिक समानता सम्बन्धी कानून कार्यान्वनमा आएको छ । त्यहाँ पहिलोपटक समलिंगी विवाह भएको छ । लेस्बियन (महिला समलिंगी) जोडीले कानून कार्यान्वयनमा आए लगत्तै विवाह गरेका हुन् । कोस्टारिकामा वैवाहिक समानता सम्बन्धी कानून सोमबार मध्यरातदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । वैवाहिक समानता कायम गर्ने कोस्टारिकामा पहिलो मध्य अमेरिकी देश बनेको छ […]
October 25, 2020 mithokhabarLeaveaComment on नेहा कक्करले आफूभन्दा ७ वर्ष कान्छा रोहनप्रितसँग गरिन् विवाह (भिडियो हेर्नुस्)
एजेन्सी । भारतकी चर्चित गायिका नेहा कक्करले अन्तत आफ्ना प्रेमी रोहनप्रितसंग विवाह गरेकी छन् । उनको विवाहका बारेमा अनेक अड्कलवाजी गरिएको थियो । प्रचारका लागि विवाहको प्रचार गरिएको भन्दै गरिएको अड्कल गलत सावित भएको छ । दुई परिवारका बीचमा शनिबार विवाह भएको छ । विवाहको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । उनले विवाह […]
नाइजेरियाको स्थानीयको प्रदर्शनः प्रहरीले चलाएको गोली लागेर २० जनाको मृत्यु
October 21, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on नाइजेरियाको स्थानीयको प्रदर्शनः प्रहरीले चलाएको गोली लागेर २० जनाको मृत्यु
नाइजेरियाको स्थानीयको प्रदर्शनः प्रहरीले चलाएको गोली लागेर २० जनाको मृत्यु एजेन्सीः नाइजेरियाको लागोस शहरमा प्रहरीको दमनविरुद्ध चर्किएको प्रदर्शनमा २० जनाको मृत्यु भने ५० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । प्रदर्शन चर्किदै गएपछि सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर उनीहरुको मृत्यु भएको हो । घटनापछि लागोस र आसपासको क्षेत्रमा अनिश्चितलकालीन कफ्र्यू लगाइएको बीबीसीले जनाएको छ । गोलीकाण्डलाई लिएर […]
October 20, 2020 mithokhabarLeaveaComment on ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या डेढ लाख नाघ्यो
काठमाण्डाै :- ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या डेढ लाख नाघेको छ ।ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट एक लाख ५० हजार १ सय ९८ जनाको ज्यान गएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो । ५० लाख ८२ हजार ६ सय ३७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको ब्राजिल सङ्क्रमित धेरै हुने देशको सूचीमा तेस्रो स्थानमा छ । […]
October 20, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on कोरोना महामारीबीच अमेरिकमा शक्तीशाली भूकम्प, सुनामीको चेतावनी
कोरोना महामारीबीच अमेरिकमा शक्तीशाली भूकम्प, सुनामीको चेतावनी काठमाडौं – अमेरिकामा शक्तीशाली भुकम्प गएको छ । कोरोना महामारीको अवस्थामा अमेरिकाको होमरमा अलास्का नजिक भूकम्प गएको समाचारमा जनाइएको छ । अमेरिकाको होमरमा अलास्का नजिक नेपाली समयअनुसार बिहान साढे २ बजे ७.३ रेक्टरको भूकम्प गएको र भूकम्पको केन्द्र होमर अलास्कादेखि ७३५ किलोमिटर दक्षिणपश्चिममा रहेको जनाइएको छ । भूकम्प […]